↑ "Honour Steve Irwin's passion for nature", Queensland Government Department of Education and Training, 2006.
↑ Crittall, Ron (2009). Frommer's Australia 2010. Frommer's, 33. ISBN 978-0-470-48214-8။ 16 January 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စတိဗ်_အာဝင်&oldid=384634" မှ ရယူရန်
၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇၊ ၁၃:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇၊ ၁၃:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။